Angovo azo avy amin’ ny herin’ny masoandro : Efa azo ampiasaina ny 20 MW etsy Ambohimpihaonana -
AccueilRaharaham-pirenenaAngovo azo avy amin’ ny herin’ny masoandro : Efa azo ampiasaina ny 20 MW etsy Ambohimpihaonana
25/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Efa azo ampiasaina amin’ izay, ary notokanana ny 23 ny volana jona teo ireo plaky hahazoana herinaratra any Ampohimpihaonana , distrikan’ Ambatolampy izay manome herinaratra hatrany amin’ ny 20 Mw, izy io no goavana indrindra raha aty amin’ ny faritry ny Ranomasimbe indianina, ary ny tsara indrindra ihany koa aty amin’ ny faritra afrika (Subsaharienne). Raha mikasika ny herinaratra azo avy amin’ izao fotodrafitrasa izao dia ny 30 % dia hanampy ny tambazotrana herinaratra ao Antsirabe, ary ny 70% kosa dia hanampy ny eto Antananarivo, Itasy ary Moramanga. Raha ny velaran’ ny fotodrafitrasa izay misy ireo fotodrafitrasa izay manome angovo azo avy amin’ ny herin’ny masoandro ity koa dia mahatratra 33 Ha, izay ahitana plaky 73 008, izay manome tanjaka 20 MW avy. Izany hoe ny angovo azo avy aminy dia afaka ampiasaina hatrany amin’ ny 50 000. Noho izany dia tombontsoa goavana tokoa no azo manoloana ny fahavitan’ izao fotodrafitrasa goavana izao, satria dia naverin’ ny filoha nohazavaina hatrany izany tombontsoa izany, nambarany tamin’ izany fa raha mamokatra 1 Kwh ( takamoa miisa 10 amina 100 W, mandritra ny ora iray) izany hoe 1000 Ariary ka amidy 640 Ariary amin’ ireo mpanjifa, dia 360 Ariary ny KwH ny fatiantoka. Noho izany voatery manentsina ny banga ny fanjakana. Izany indrindra hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fitokanana ny fotdrafitrasa no anton’ ny fihazakazahana tahaka izao.
Maharitra 25 taona ny fifanarahan’ny orinasa JIRAMA izay mividy herinaratra amin’ io orinasa antsoina hoe ‘’ Green Yellow’’ io. Nambaran’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ihany koa fa efa mandroso ankehitriny ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa ao de Farahantsana ao Mahitsy, ary mandeha ihany koa ny fanadihadiana ao Sahofika, Ranomafana ary Antetezambato, izany hoe toerana 45 manerana ny firenena no efa voafaritra hahazo herinaratra azo avy amin’ ny masoandro avokoa. Noho izany dia tsy nihafahafa ny filoha Hery Rajaonarimampianina nilaza fa ny fampandrosoana ekonomika sy sosialy dia lalana mazava ialana amin’ny fahantrana, ary ahafahana ihany koa izany mamaha ny olana izay misy, izay nampahantra hatrany ny firenena. Noho izany dia nanao antso amin’ny tokony hamaranana amin’ izay ny lolom-po sy ny fanelezana tsaho ny filoha, mba hahatongavana amin’ny fitoniana ho tombontsoan’ ny vahoaka malagasy. Tanjona iraisan’ny rehetra ihany koa ny hanasoa ny vahoaka Malagasy sy ny hanajana ihany koa ny safidy amin’ ny alalan’ ny fifidianana demokratika sy mangarahara. Ho an’ ireo mpampianatra dia nanao antso ihany koa ny filoha mba hanajan’izy ireo ny tenany, mba tsy hisy ny taona fotsy izay misy fiantraikany goavana amin’ ny zaza malagasy . “ Tsy ho vita anatin’ ny volana vitsy ny fanarenana firenena izay nilomana anatin’ny fahantrana nandritra ny 50 taona. Ilaina noho izany ny manova fotom-pisainana mba ahafahana miarina sy hahatongavana any amin’ny fisandratana ekonomika sy sosialy. Ilain’ ny firenena noho izany ny ainga vao avy amin’ ny vahoaka tsirairay mba hivoaka amin’ izao fahantrana lalina izao” hoy hatrany ny Filoham-pirenena malagasy.